प्रोजेक्ट: जंगली चराहरू असीमित - Google नक्साको साथ रमाईलो Martech Zone
आइतबार, जुलाई 29, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
दयालु मा मा मान्छे मा जंगली चराहरू असीमित उनीहरूको स्टोर म्यापिंग्स लाई रूपान्तरण गर्न मेरो मद्दत अनुरोध छ गुगल। यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि किन म हालै शान्त छु भने, यो त्यस्तो होइन किनकि मलाई ब्लग आउट गरिएको छ - किनभने यो हो कि म वास्तवमै पार्कबाट बाहिर निस्कदै छु।
साथै, म एक हप्तामा नयाँ पूर्ण-समय काम सुरू गर्दैछु र निश्चित गर्न चाहन्छौं कि हामी हाम्रो डेडलाइन अघि राम्रोसँग वितरण गर्न सक्षम छौं! त्यस कारणले गर्दा मैले केहि सहयोग दर्ता गरेको छु… स्टीफनले एउटा राम्रो काम गरिरहेछन् र मेरो अर्को साथी टोडले डेलिभरी अघि कुनै कोड अनुकूलन गर्न र सफा गर्न मद्दत गर्नेछ।
संक्षिप्तमा, एप्लिकेसन PHP, MySQL, र Ajax मा निर्मित छ र वन्य बर्ड्सको आगन्तुकहरूको लागि नजिकका स्थानहरू खोजी गर्नका लागि यो एक माध्यम हो। KML फाईलमा डाटा क्यास गरिएको छ प्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्न र Google नक्सा एपिआईको सबैभन्दा नयाँ र सबैभन्दा ठूलो सुविधाहरूको फाइदा लिन। त्यहाँ केही थप जटिलताका साथै डाटा एक भन्दा बढी स्थानमा राखिएको छ तर यो रमाईलो चुनौतीको एक हो।
यहाँ (पूर्ण कार्यात्मक!) प्रशासनिक खण्डको पूर्वावलोकन छ जहाँ प्रशासकहरूले नक्सामा उनीहरूको भण्डारहरूको स्थानहरू लगइन गर्न र अपडेट गर्न सक्दछन्।
त्यहाँ अझै काम गर्न बाँकी छ, तर प्रगति यति टाढा राम्रो भएको छ। हामीले एक जियोजी डाटाबेस लोड गर्न आवश्यक छ आगन्तुकहरूको स्थान भविष्यवाणी गर्नका साथै पर्यटकहरूको ठेगानाबाट कुनै पनि स्थानको लागि निर्देशनहरू प्रदान गर्न। रमाईलो सामान! धैर्य गर्नुहोस्, केही हप्तामा हामी सामान्यमा फर्कनेछौं।
जुलाई,, २०१ at 30::2007। बिहान
राम्रो, डग! हामीले भर्खरै यस्तै केहि कार्यान्वयन गरेका छौं फ्यानिमेसन जुन यो हप्ता सुरु हुँदैछ। धेरै समान कार्यात्मक, बाहेक हामीले डीलरहरूको फाइल अपलोड गर्न अनुमति दिइरहेका छौं र क्यानाडा पनि थपेका छौं। न्यानो सामान!
ओह, र नयाँ कामको लागि बधाई। यसको बारेमा थप सुन्न अगाडि हेर्दै! /जिम
यस्तो देखिन्छ कि परियोजना राम्रोसँग आउँदैछ, डग। म पक्का छु कि तपाईंले यो जस्तो परियोजनाको सामना गर्ने रचनात्मक पक्षहरूको आनन्द लिनुहुन्छ।
तपाईंको ग्राहकको समग्र व्यापार लक्ष्यहरू सुधार गर्ने सुझावहरू प्रदान गर्नु तपाईंको धेरै बलियो बिन्दु जस्तो देखिन्छ - राम्रो काम!